Izinzuzo ze-CBD, ukusetshenziswa, imiphumela emibi kanye nemithamo - shopgiejo.com
Qiniseka ukuthi ufunda izindatshana zethu zakamuva mayelana ne-CBD. Sabelana ngolwazi mayelana nomthamo, ukusetshenziswa, izinzuzo kanye nemiphumela engemihle. Uma ulandela iseluleko sethu, uzobe usendleleni eya emqondweni nomzimba onempilo.
Kwenziwe Ukubuyekezwa Komkhiqizo We-Hemp
Ngokungafani nezinye izinkampani ze-CBD, I-Made by Hemp izithatha njengophawu lwe-premium phakathi kwezinye izinkampani ze-CBD. Inkampani inikeza amakhasimende ayo
Ukubuyekezwa kwe-Kushly CBD
IKushly CBD yinkampani esanda kusungulwa ye-CBD eyaziwa kakhulu ngemikhiqizo yayo yezinzuzo ezinhle kakhulu kumakhasimende ayo. Inkampani inikeza
Nakuba izinkampani eziningi ze-CBD zenze imisebenzi yazo ehlukene, iningi lazo alisebenzi kuzo. Ngokuphambene nalokho, u-Irwin Naturals
Phakamisa Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-CBd
I-Elevate iphakathi kwezinkampani ezimbalwa ezibeke eceleni inzuzo futhi zabeka phambili ukusiza wonke umuntu, futhi noma ubani ujabulela inkululeko yokuphila ngokuzimisela, ngenjabulo.
Njengezinye izinkampani ze-CBD, i-CBD Dixie Botanicals nayo ihlinzeka ngezinhlobonhlobo zemikhiqizo kubathengi bayo. Imikhiqizo isukela kuma-tinctures,
Phakathi kwezinkampani ezaziwayo ze-CBD, i-cbdMD ayihlukile. Ngokungafani nezinye izinkampani ze-CBD, yaziwa ngamasu ayo okuthengisa, ukuhlonishwa kwemikhiqizo, kanye nokubambisana.
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-Cbdistillery
Isizathu esikhulu kunazo zonke esibheka uphawu lwe-CBDIstillery njengenye ehamba phambili yingoba bahlinzeka ngolwazi oluhle kakhulu kusukela ekuqaleni kuye
UKUBUYEKEZWA KWE-PAW CBD
Nakuba i-Paw inganikezi ulwazi oluningi lwasemuva, siqoqe imininingwane ebalulekile ezingxenyeni ezihlukahlukene ukuze sikusize uqonde
UKUBUYEKEZWA KWE-PROCANA 2022
I-Procana ibiwusizo kumakhasimende ayo iminyaka eminingi ngokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu. Kuyathakazelisa ukuthi inkampani ibilokhu yakha
UKUBUYEKEZWA KWE-DIXIE BOTANICAS 2022
I-Dixie Botanicals izimemezela njenge-trailblazer yebhizinisi le-CBD ngoba inomlando osuka ku-2009. Eqinisweni,
I-Sound Bites Nutrition LLC iphethwe futhi iqhutshwa yi-